Archive du 20170524
Depiote Randrianasolo Jean Nicolas � Tsy nahazo 4 x4 vaovao izany aho �
Samy nilaza ho tsy nahazo an�ilay fiara 4 x 4 voalaza fa nanambatambazana ny sasantsasany tamin�ireo depiote mivory eny Tsimbazaza avokoa ireo voatonontonona ho nahazo tamin�ny fitondram-panjakana.
Vina sy programa politika Safidy sy toky demokratika ho an�ny vahoaka
Mifamotoana mandritra ny roa andro nanomboka omaly indray eny amin�ny Carlton Anosy ireo antoko politika eto Madagasikara.
Saino sy diniho !
Mba indramiko kely ry Jean ny tononkalon�ilay akama tany ho any ity mba hampifaliana kely anareo a !
Raharaha Boaderozy Singapour Hosamborina i Anth�lme Ramparany ?
Nametraka fitoriana eny amin�ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ny governemanta Malagasy mba hanohizana ny fanenjehana ara-pitsarana ireo tompon�antoka tamin�ny fanondranana Boaderozy tany Singapour ny taona 2014.
Mitohy ny fanabadoana
Na tamin�ny andron�Andrianampoinimerina aza nahira-tsaina tsara ny mpanjaka nilaza tamin�ireo tandapa hoe omeo ny vahoaka ny angady sy ny sobika ahafahan�ny tany mamelona antsika.
Oniversiten�Antananarivo Miato ny fampianarana, hoy ny SECES
Nanapa-kevitra ny hampiato ny fampianarana eny amin�ny oniversite ny sendikan�ny mpampianatra-mpikaroka sy ny mpikaroka-mpampianatra na ny SECES taorian�ny 72 ora nomen�izy ireo ny fanjakana, izay tapitra omaly.
Herisetra sy fakana an-keriny Mampiaka-peo ireo mpandraharaha
Efa tsy rariny intsony ny herisetra, fakana an-keriny, fandrobana atao amin�ireo mpandraharaha, hoy ny fanambarana ofisialy navoakan�ny fianakaviamben�ny mpandraharaha eto Madagasikara omaly izay ahitana ireo fikambanana goavana toy ny CFOIM, SIM, GEM, FIVMPAMA, GEFP, FIOVA, GEPAM �